नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकाको भर्जिनिया निवासी नेपाली मुलका ११ बर्सिय प्रनब नेपाल र क्रितार्थ पुडासैनीले जिते गोल्ड मेडल !
अमेरिकाको भर्जिनिया निवासी नेपाली मुलका ११ बर्सिय प्रनब नेपाल र क्रितार्थ पुडासैनीले जिते गोल्ड मेडल !
अमेरिकाको भर्जिनिया लिजबर्ग निवासी नेपाली मुलका ११ बर्सिय प्रनब नेपाल World Class US Capital open TAE Kwon Do Championship Final Round मा Sparring 74lb मा Black belt second degree गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल भएका छन । नेपाली मुलका नेपाल ११ बर्षकै उमेरमा यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भबत पहिलो हुन । उनी डौग्लास इलिमेन्ट्रि स्कूलमा ५ कक्षामा अध्ययनरत छन । उनी World Class US Capital open TAE Kwon Do Championship मा अब Instructor को रुपमा पनि काम गर्न पाउने भएका छन । उनी समाजसेबी सुनिता खत्री एबम दिलिप नेपाल का पुत्र हुन । प्रनबकी दिदी समीक्षा र उनको समुह केही दिन अघि जर्ज मेँशन युनिभर्सिटीले केही दिन अघि आयोजना गरेको International Dance Competition मा प्रथम भएको थियो । बधाई छ प्रनब, समीक्षा र उनको गौरवान्वित परिवार लाई पनि
नेपाल मदर डट कमको तर्फ बाट ।
प्रनबकी दिदी समीक्षा
समाजसेबी सुनिता खत्री एबम दिलिप नेपाल
यसै गरी अर्का समाजसेबी कृष्ण मुरारी पुडासैनीका सुपुत्र क्रितार्थ पुडासैनिलाई पनि अर्को सफलता मिलेको छ ।
क्रितार्थ को सफलअता पछी खुशी हुँदै उनका पिता कृष्ण मुरारी पुडासैनी भन्नुहुन्छ " My son, Kritartha Pudasaini, was awarded two gold medals in sparring and board breaking competition by coming in first place along with one silver medal in form competition in The 2017 US Capital Tae Kwon Do Championship. Also, he received excellence certificates for his achievements. I am very proud of you my boy. Keep up your good work and all the best for your future goals!!!"
क्रितार्थ र गौरवान्वित परिवार जनमा Nepalmother.com को तर्फबाट पनि बधाई ।
तस्वीरहरु आँफै यसरी समाचार बोल्छन
क्रितार्थका माता पिता